Uvimba weLoreley -Amalungelo oLuntu kunye nobuGcisa bokuKhanya ngu-∴ PixelHELPER Foundation
Irhafu yokuthengisa kunye nerhafu yepropathi inikwe zonke izibhedlele ezihlangabezana neemfuno ze-§ 67 AO. Oku akukhathalekanga nokuba isibhedlele asisiyzuzo. Ukuxolelwa kwirhafu yomanyano kunikezelwa kuphela kwizibhedlele ezingenzi nzuzo ngaphakathi kwintsingiselo ye-§§ 51-68 AO. Okwangoku yi GmbH kubandakanya onke amathuba okurhoxisa imali. Amasebe ayevalwa kwaye itekhnoloji yesibhedlele yahanjiswa kwezinye izibhedlele. Inguqu ibe yi-GmbH engenanzuzo inokufezekiswa. Uncedo ngesicelo sabemi ukuze uqhubeke nokusebenza ngokungenanzuzo kweekliniki facebook.com/loreley-clinic Ngenkampani enamatyala angenamali yengeniso, imali eninzi kakhulu ikhona kunakwinkampani enamatyala amaninzi, akukho nzuzo inokuhamba kwakhona, kodwa kufuneka isetyenziselwe iinjongo ezingezizo zesibhedlele esitsha esingenzi ngeniso. Kwimeko yethu engaba yikliniki ngokwayo, iziko labadala kunye neworkshop entsha yabantu abakhubazekileyo kwindawo endala eSankt Goar. Ngolwazi oluthe kratya, skrolela ezantsi kweli phepha.